Haweenay Reer Somaliland Ah Oo Ku Guulaysatay Abaal-marin Aan Hore Qof Afrikaan Ahi U Kasban | Dhamays Media Group
Hargeysa (Dhamays) – Dr. Sacda Mire oo ah aqoonyahanad baratay cilmiga Aasaarta qadiimiga isla-markaana u dhalatay Somaliland, ayaa ku guuleystay abaalmarinta SAFA 2021, oo ay ku mutaysatay buugga ay qortay ee Divine_Fertility, isla markaana noqotay aqoonyahankii u horeeyey aan reer Yurub ahayn ee ku guulaysta abaal-marintan.
Dr Sacda Mire waxay wax badan ka qabtay baahinta aasaarta iyo hiddaha geeska Afrika, gaar ahaan Somaliland, wuxuuna dhiirri-gelin u yahay jiilka cusub ee aqoonyahannada, gudaha Afrika iyo meelo kaleba.” Ayuu yidhi Professor Insoll, oo taxliil ku sameeyey buuga.
Buuggu Dr Mire oo la sheegay inuu si gaar ah u baadhayo saamaynta fikirka waddaniga ah ee nolosha maalinlaha ah ee Waqooyi Bari Afrika, Iyada oo la adeegsanayo cilmi baadhistii hore ee qadiimiga iyo qowmiyadaha, fikradaha, muuqaalka dhulka, agabyada iyo caadooyinka la rumeysan yahay inay la xidhiidhaan asaliga iyo dhaqanka la wadaago.
Aqoonyahanno kala duwan oo taxliil ku sameeyey buuga ayey fikradahoodii ka mid ahayeen;
Kani waa shaqo kalsooni leh, oo xirfad leh oo uu leeyahay qof si gaar ah u qalma si uu u fuliyo cilmibaarista khuseysa … buug cajiib ah oo cad, oo laga yaabo kaliya Sada Mire (oo ay weheliso aqoonteeda aragtiyeed ee dhowr farsamooyin tacliimeed iyo isu -dhowaansho maxalli ah) waa la gaadhi lahaa. Tani waa shaqo cilmiyeed, oo leh rafcaan guud oo aad u ballaaran”. ayuu yidhi Neal Ascherson, oo ah qoraaga The King Incorporated horena u ahaa saxafi ka tirsan The Observer
Buuga Dr. Sada Mire wuxuu wax badan ka qabtay baahinta hiddaha qadiimiga ah iyo hidaha Geeska Afrika, gaar ahaan Somaliland, wuxuuna dhiirri -gelin u yahay jiil cusub oo aqoonyahanno ah, gudaha Afrika iyo meelo kaleba.” Ayuu yidhi Professor Timothy Insoll, Dib -u -eegista Qadiimiga Afrika
“Shaqo -hawleedkan iyo ballanqaadkiisii ​​hore ee gobol qadiimiga ah oo la dayacay ayaa durba Sada ka dhigaya hormuud” – Dr Stephanie Wynne-Jones, Trowelblazers iyo Jaamacadda York.
Previous: Madaxweyne Biixi Oo Ka Qeyb-galay Xafladda Qalin-jabinta Dufcaddii 18-aad oo ka baxda Jaamacadda Hargeysa
Next: War Farxad-leh:Ganacsade Reer Somaliland Oo Xabaalaha Baqiic Ugu Deeqay Cagaf Bulshada ka Caawin Doonta Qodista Xabaalaha.